မွန်တေးသံရှင်အချို့က မွန်အောင်နိုင်ရေးအတွက်တေးသီချင်းဖန်တီးနေ – TodayZ
” မွန်ပြည်နယ်နဲ့နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မွန်လူမျိုးအားလုံးရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကိုတစ်နိုင်ငံလုံးက အံ့ဩဂုဏ်ယူရလောက်သည်အထိ စည်းလုံးညီညွတ်မှုအင်အားကို ပြသခွင့်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ် ”
Interview ကို မြန်မာဘာသာစကားအပြင်မွန်ဘာသာစကားဖြင့်ပါဖော်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။
လာမယ့်၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲအတွက် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလည်း ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရှိပါတယ်။ ထိုတိုင်းရင်းသားပါတီအားလုံးထဲကမှ ပထမဆုံးအနေနဲ့ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကို မိတ်ဆက်ပါရစေ။ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီက သူတို့ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက် မဲဆွယ်မည့် တေးသီချင်းကိုဖန်တီးသီဆိုအသံသွင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မွန်တိုင်းရင်းသား တေးသံရှင် ဇွဲလေးနှင့် Today Z Media ကအင်တာဗျူးခဲ့တာကိုပြန်လည်ဖော်ပြပါရစေ။
Today Z မေး။ ။ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီက ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအတွက်တေးသီချင်းဖန်တီးထားတယ်လို့သိရတယ်။ တေးသီချင်းအစဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးပြောပေးစေချင်တယ်။
မွန်တေးသံရှင်ဇွဲလေး ဖြေ။ ။ကျွန်တော့်အနုပညာနာမည်က ဇွဲလေးပါ မွန်လိုကတော့ မာံဇဲခိုဟ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်ကတည်းက မွန်လူမျိုးအဖြစ်ခံယူခဲ့ပြီး လူမျိုးအကျိုးကို အနုပညာနဲ့တတ်စွမ်းသောဘက်က သယ်ပိုးခဲ့ပါတယ်။မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီဘက်က လူကြီးတွေရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကြောင့် မွန်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေဖြင့် မျိုးချစ်စိတ်တစ်ခုနဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေ စည်းလုံးဖို့လိုပြီဆိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အောင်နိုင်ရေးသီချင်းကို စလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Today Z မေး။ ။ခုတေးသီချင်းကိုဘယ်လိုပုံစံဖန်တီးနေလဲ။ ဘယ်သူတွေပါလဲ။
မွန်တေးသံရှင်ဇွဲလေး ဖြေ။ ။မွန်ညီညွတ်‌ရေးပါတီအတွက် ရေးစပ်ထားသော ဟင်္သာတို့ရဲ့မဲတစ်ပြား လို့နာမည်ပေးထားသည့်
အောင်နိုင်ရေးသီချင်းကိုတော့ ကရင်လူမျိုးကိုဒီဇွဲနှင့်ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရေးစပ်ထားပြီး မွန်အဆိုတော်ဝတီက ကျွန်တော်နဲ့အတူ ပါဝင်အားဖြည့်သီဆိုထားပါတယ်။
Today Z မေး။ ။သီချင်းက ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအတွက် ဘယ်လောက်ထိရောက်နိုင်မလဲ။
မွန်တေးသံရှင်ဇွဲလေး ဖြေ။ ။မွန်ပြည်နယ်နှင့်နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေထိုင်ကြသော မွန်လူမျိုးအားလုံး၏ မျိုးချစ်စိတ်ကိုတစ်နိုင်ငံလုံးက အံ့ဩဂုဏ်ယူရလောက်သည်အထိ စည်းလုံးညီညွတ်မှုအင်အားကို ပြသခွင့်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်
Today Z မေး။ ။မွန်ဘာသာစကားနဲ့ဆိုမှာလား။မြန်မာစကားနဲ့ဆိုမှာလား။
မွန်တေးသံရှင်ဇွဲလေး ဖြေ။ ။တိုင်းရင်းသားလူမျိုး(၁၃၅)မျိုးစလုံး ခံစားလို့ရအောင် မြန်မာဘာသာနဲ့ပဲ သီဆိုထားပါတယ် ။
Today Zမေး။ ။ခု သီချင်းအနေထား ဘယ်လောက်ထိပြီးနေပြီလဲ။လူထုကြားဘယ်တော့ စရောက်မလဲ။
မွန်တေးသံရှင်ဇွဲလေး ဖြေ။ ။Studioမှာပဲ Vocal Guideချပြီး အကြမ်းတစ်ခေါက်သွင်းလိုက် မကြိုက်ရင်ပြန်သွင်းလိုက်နဲ့
အချောပြန်သွင်းဖို့လုပ်နေတုန်းပါပဲ။ ဩဂုတ်လကုန်လောက် ကျွန်တော့်Pageကနေ MVရိုက်ပြီး မွန်လူမျိုးတွေဆီ အရောက်ပို့နိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
Today Z မေး။ ။ရွေးကောက်ပွဲကာလတွေမှာ ဖျော်ဖြေရေး ဆိုတာတွေလုပ်မှာလား။
မွန်တေးသံရှင်ဇွဲလေး ဖြေ။ ။နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားသော ကာလရောက်ရင်တော့ မွန်ပြည်နယ်မှာ လာရောက်ဖျော်ဖြေဖို့အတွက် ဌာနချုပ်က လူကြီးတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးထားတုန်းပါ ။
Today Z မေး။ ။တခြားဖြည့်ပြောချင်တာလေးရှိပြောပေးပါ။
မွန်တေးသံရှင်ဇွဲလေး ဖြေ။ ။
မွန်လူမျိုးအားလုံး မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကို သန့်ရှင်းစွာဖြင့် မဲထည့်ကြဖို့၊မွန်ပြည်နယ်မှာ မွန်လူမျိုးအားလုံးရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ အတူ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ အနိုင်ရဖို့၊မွန်လူမျိုးတိုင်း လူမျိုးရေးအကျိုးကို သယ်ပိုးနိုင်ဖို့အတွက် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ တံဆိပ်ဘေးမှာ ရင်ဘတ်ထဲကချစ်တတ်ဖို့ထက် အမှန်ခြစ်ပြီးသက်သေပြဖို့ မွန်အနုပညာရှင် အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ် ။
Today Z ။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပဍဲက်ုပေဲါရဲုမာ ၂၀၂၀ဏံတှေ် ကောန်ဂကူဒေသတ္နဟ်သ်အာင်တံလေဝ်လုပ်ပေဲါပြိုင်ရဲုမဲာနွံမံင်ကီုရ. ပဍဲက်ုကောန်ဂကူသီုဖအိုတ်ဂှ် ဆက်မိတ်ဏာက်ုဗော်ညီသ္မဟ်မန်ပိုယ် ဗွဲကိုတ်က္လာရ ဗော်မန်ပိုယ်ဏံ သွက်ဂွံစုတ်ရမျာင်ဒွက်မာန်ပါတီဂှ် စီဇန်ဖန်မံင်ဂှ် တီကေတ်ရ ပရောပရာဏံဂ်ှသ္မာဒယ်ှဒွက်မန် (ဇွဲလေး )အင်တာဗျုလဝ်ပဍဲက်ု Today Zmediaဏံရ
Today Z သ္မာန်. ပဍဲက်ုပေဲါရဲုမဲာ ၂၀၂၀ဏံဒွက်ဗော်ညီသ္မဟ်မန် စီဇန်လဝ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ ဟိုတ်ဒွက်ဏံဂွံစဒ်ှက္လုင်လေဝ်ဟီုလ’စက်ုညိ
ဇွဲလေး —- ယမုအနုပညာအဲဂ်ှဗီုဗ္မာ ဇွဲလေး ဗီုမန်ဂှ် ဇဲခိုဟ်ရ.၂၀၁၅တေံရအဲစ္မတ်လဝ်ကောန်ဂကူမန်မွဲတ္လရ သွက်ကောန်ဂကူမန်ဂ်ှအဲရေင်တ္လုင်မံင် ဗော်ညီသ္မဟ်မန်တံ (ကမ်လှမ်း)လဝ်က်ုအဲ သွက်ဂွံပတိတ်ဒွက် အံင်ဇ္နးယျဂှ် အနုပညာမန်မွဲတ္လဂွံစကလောန်လဝ်ဒွက်ဏံရ
Today Z ….. လမုဒွက်ဏံဗီုလ်ုဖန်မံင်ရော ညဂ်ှပါကီုရော
ဇွဲလေး …… ဗော်ညီသ္မဟ်မန်က်ုလဝ်ယမု ဒွက်မဲာဟံသာ ဒွက်ဂှ် ဂကူကရင် ဒီဇွဲက်ု အဲ ညး၂ ပံင်ချူလဝ်တဲု သ္မာဒယှဲဒွက်မန် ဝတီက်ုအဲ လုပ်ဒယ်ှလဝ်ရ
Today Z …… ပဍဲက်ုပေဲါရဲုမဲာဒွက်ဏံ ကိစ္စဝိုတ်လ်ုစိုပ်မာန်ဂ်ှရော
ဇွဲလေး ……. ပဍဲဍျင်မန်ဏံကီု ပဍဲဍျင်မ်ငး ဂကူမန်ပိုယ်ကီု သီုဖအိုတ်စိုတ်ဓာတ်ဆာန်ဂကူ ဇြဟတ်ပံင်ကောံညီသာဏောဝ်ဂွံထွးကေတ်ရ
Today Z …. ဒယ်ှဗီုမန်ဟာ ဒယ်ှဗီုဗ္မာဟာ ဒွက်ဏံ
ဇွဲလေး …….. ကောန်ဍျင်အရင် (၁၃၅)တံသီုဖအိုတ် ဂွံက္လင်ကီု ဒယှ် ဗီုဘာသာဗ္မာရ
Today Z ….. ဒွက်ဏံစိုတ်ဂွံဧိုတ်လ်ု ရော ဆလိုဂွံစိုပ်အကြာမ္နိဟ်တံရော
ဇွဲလေး …… ဂိတုသြဂုတ်ဏံအိုတ်တှေ် page အဲ အဲတက်လဝ်MVတဲု အဲပလံင် က်ုကောန်ဂကူမန်ပိုယ် ရ ချိင်လဝ်ဗီုဂှ်
Today Z …. ပဍဲအခိင်ပေဲါရဲုမဲာဏံ ကလောန်မံင်သွက်ဂွံဒယ်ှဒွက်ဏီဟာ
ဇွဲလေး …… ဂကောံသမ္မတက္မိန်ဍျင် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်အခိင်ကာလစိုပ်တှေ် ပဍဲဍျင်မန်ပိုယ်တေံ ကလုင်ဒယ်ှဏောဝ်ဂှ် တက်လဝ်ကျာက်ု ဂကောံဌာန တံရ
Today Z …… မုမိက်ဂွံဟီုမံင်ဏီရောတှေ် ဟီုဂွံမံင်
ဇွဲလေး …….. ဂကူမန်တံသီုဖအိုတ် ပဍဲက်ုပါတီဗော်ညီသ္မဟ်မန်သ်အးသ်ငးစုတ်မဲာအိုတ်ညိ ပဍဲက်ုဍျင်မန်ပိုယ်ဏံ ဂကူမန်တံသီုဖအိုတ်က်ုဂွံပံင်ကောံညီသာအာညိ ဗော်ညီသ္မဟ်မန်ပိုယ်ဂွံမာန်ကောန်ဂကူမန်သီုဖအိုတ်ဂွံယိုက်ဂ္လေင်ဗော်ညီသ္မဟ်မန်မာန်စိုတ်ဆာန်က်ုဂွံမံက်ဂတဝ်ပဍဲက်ုကောန်ဂကူအိုတ်ညိ သ္မာဒယ်ှဒွက်မန်ဇွဲလေး ဆော်မငုးဏာရ
My mom always ______ me to be kind to others.